Kuenderera mberi Kuvandudza Chishandiso 2.0 Zvino Zviripo | Ndinobva mac
Pedro Rodas | | iOS, Mac makomputa, OS X Yosemite
Imwe yemamiriro ezvinhu atakaona apo Apple yakaita kuti iyo itsva OS X Yosemite iwanikwe kune vashandisi ndeyekuti zviuru zvevanoisa maoko avo mumisoro yavo pavakaziva kuti imwe yeyeredzi maficha eiyo nyowani system, iko kugona kusanganisa zvishandiso zveIOS neOS X uchishandisa Kuenderera uye Handoff hakuna kutsigirwa pane ese maMac.
Kutsoropodza uye zvakatumirwa pamaforamu ekugadzirisa eApple zvakakurumidza kutanga kubuda, asi zano rakanga richiri pachena, nekuti makomputa asingateedzere aisakwanisa kushandisa Kuenderera mberi. Uku kusapindirana kwakangouya kubva mhando yeBluetooth yaive neMac.
chamazuva, iyo protocol yatinogona kutumira nekutambira mafoni pazvigadzirwa zvine iOS 8.1 uye OS X Yosemite, ine muganho uye ndeyekuti inogona chete kushandiswa pakati pemidziyo ine Bluetooth 4.0 LE (Simba Rakaderera).
Zvisinei, hazvina kutora nguva kuti vamwe vagadziri vawane mhinduro yavaidaidza Kuenderera mberi Kuvandudza Chishandiso. Ichi chishandiso chinongonyengedza iyo system mukutenda kuti isu tine Bluetooth 4.0 LE paMac uye nekudaro kugona kushandisa Kuenderera.
Nekudaro, pakutanga ichi chishandiso, mune iyo Mac yako yanga yakura kwazvo uye isina Bluetooth 4.0, zvaidikanwa kuisa kadhi isina waya. Zvino neshanduro 2.0 ye Kuenderera mberi Kuvandudza Chishandiso maitiro acho akareruka uye zvave kutokwanisika shandisa yakapusa dongle MAKARALI USB 4.0, kana chii chakafanana, tsvimbo ye USB inowedzera Bluetooth pakombuta.
Nekudaro, hazvisi zvese zvishandiso zvinotengeswa zvinoratidzwa. Anogadzira chishandiso anopa zano kuti anodiwa anofanirwa kunge achivakirwa pachip Broadcom BCM20702, yakafanana neiya inoshandiswa naApple paKuenderera-inoenderana Macs.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kana tichizotenga chigadzirwa ichi, isu tinofanirwa kuziva kuti iyo Instant Hotspot haishande chaizvo. Kuti utore chishandiso, tinya pane iyo next link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » iOS » Kuenderera mberi Kuvandudza Chishandiso cheNhaka Macs ikozvino inotsigira Bluetooth 4.0
Zvakanaka, ndinogona kufona nekutambira macbook pro yepakati pa2009 uye iMac 27 kubva pakati pa2010… handisati ndaedza zvimwe.
Tsvaga kuti sei Mac yako inomuka